IINGCAMANGO EZINGAMA-50 + EZIPHAMBILI ZECARPORT-INDAWO EFANELEKILEYO YOKUGCINA UBUQAQAWULI BAKHO KUNYE NOVUYO - UYILO LWEKHAYA
Iingcamango ezingama-50 + eziPhambili zeCarport-Indawo efanelekileyo yokuGcina ubuqaqawuli bakho kunye noVuyo
Nokuba uhlala kwimozulu ebandayo okanye eshushu, i-carport inokwenza ubomi bakho bube lula. Khawufane ucinge, uphumela ngaphandle ebusika kwaye imoto yakho igqunywe likhephu. Okanye mhlawumbi uhlala kwimozulu eshushu, kwaye imoto yakho ingathi ziidigri ezili-1 000 phakathi ehlotyeni.
Ezi zimvo zecarport ziya kukunceda wenze indawo yangaphandle eya kuthi ikhusele imoto yakho kwizinto. Akusekho khephu liphakamileyo kwisithuthi sakho. Akusekho mitha yelanga ibetha phantsi kwaye upheka imoto yakho kunye nomphakathi wayo.
Ukuba ulungele ukwakha i-carport ye-DIY, emva koko jonga ezi ndlela ngaphambi kokuba uzinze kukhetho lwakho.
1. Izimvo zale mihla zeCarport
Ngaba uhlala kwikhaya elikhangeleka mihla? Emva koko kuya kufuneka ubhangqe ikhaya lakho langoku kunye ne-carport ekwajongeka njengeyala maxesha. Oku kuthetha imigca ebushelelezi, iinkcukacha ezincinci, kunye nezinto zangoku.
Umthombo: @si_bunbun_tietien nge-Instagram
Umthombo: @hop_arquitectos nge-Instagram
Umthombo: @ gregoire.archi nge-Instagram
yiva akukho ubona akukho thetha tattoo
Umthombo: @siebau_raumsysteme nge-Instagram
Zama ukusebenzisa indibaniselwano yezixhobo zecarport yakho yanamhlanje. Unokusebenzisa isinyithi ukwenza eyona nto iphambili, emva koko usebenzise iinkuni ukwenza udonga lwangasese, emva koko ube ne-acrylic ecacileyo eluphahleni. Ngokusebenzisa izinto ezahlukeneyo, unokufumana izibonelelo abanokuthi bazinike.
Uphahla lwe-acrylic luyilo lwangoku oluvumela ukukhanya ukuba kucofwe, kugcinwe indawo ephantsi kwayo ikhanya kakuhle kwaye iyasebenziseka. Khangela izinto zokuphahla ezinqamlekileyo zembonakalo yala maxesha neyodwa kwi-carport yakho. Ijika nalo linceda ukugcina uphahla lucacile kwaye kunciphisa inani lolondolozo oya kuba nalo.
Xa ukhetha umthi, khangela ukhathalelo oluphathwe ngcinezelo okanye olunqabileyo. Oku kuyakuqinisekisa ukuba ijongeka intle kwaye iza kuhlala. I-bamboo, i-redwood, i-cypress, kunye nomsedare obomvu zonke ziimithi ezizinzileyo. Sebenzisa i-2 × 4 yokusika kwemiqadi yeenkuni oza kuyinyusa ngokuthe tyaba kunye nendawo encinci phakathi kwesiqwenga ngasinye.
Okokugqibela kwizimvo zangoku zecarport, cinga ukutsiba ngokupheleleyo izixhobo zemveli zokwakha. Iseyile okanye umthunzi weeyile yikhaphethi sisiqwenga esikhulu samanzi angenanto okanye izinto zepolyester. Inqunywe kwimilo yesiko efakwa kwindawo yakho yokupaka.
Esi siqwenga semathiriyeli siyakhusela, sihlala ixesha elide, silungelelanisiwe, kwaye sinokugubungela ngokulula izithuthi ezininzi.
2. Kuqhotyoshelwe apha iiNgcaciso zeCarport
I-carport eqhotyoshelweyo yindawo yokwakha okanye yokwakha uphahla ephuma ekhayeni lakho okanye kwesinye isakhiwo. Isakhiwo esele sikhona sixhasa icala elinye kunye nezithuba ezixhasayo kwelinye. Ezi zakhiwo ziqhotyoshelweyo zinokwenziwa ngazo zonke iintlobo zezixhobo.
Umthombo: @collinsbuildingdesigns nge-Instagram
Icebo lokwenza i-carport yakho eqhotyoshelweyo ijongeke kakhulu kukusebenzisa izinto ezifanayo ezakhiwayo esele zikho. Oku kwenza ukuba i-carport ijongeke njengenxalenye yoqobo kunye neenjongo zesakhiwo.
Ukuba awukwazi ukusebenzisa izinto zokuqala, kuya kufuneka usebenzise into edibanisa kakuhle. Amakhaya aqhelekileyo ngokwesiko kwisitayile kunye noyilo anokuxhamla kwisakhelo senkuni. Amakhaya aphucukileyo ngakumbi anokubonakala mahle ngesakhiwo sekhaphethi yentsimbi. Ungazibopha yonke into kunye nezinye ezikhethwe ngokugqibeleleyo izimvo zendlela yokuma komhlaba .
Xa uncamathisela i-carport yakho ekhayeni lakho, qiniseka ukuba unezakhelo ezifanelekileyo ezikhoyo. Kuya kufuneka uncamathisele i-carport kwindawo efanelekileyo ekhayeni lakho ukuze ixhase ubunzima. Kufuneka kwakhona ube nenkxaso efanelekileyo kwelinye icala ukuze ingatshoni kwaye ikrazule ekhaya.
3. Izimvo zeCarport Caren
Umthi yinto eguquguqukayo, efikelelekayo, kunye neyomeleleyo egqibeleleyo ekwakheni i-carport yakho. Kufuneka uqiniseke ukuba usebenzisa iinkuni ezilungiselelwe ukusetyenziswa kwangaphandle. Ngaphandle koko, ubeka emngciphekweni wokulahla ukufuma okanye iibugs.
Umthombo: @hausfuerfrieda nge-Instagram
Xa uyila i-carport yakho eyenziwe ngomthi, kufuneka ucinge ngesitayile oya kuso. I-pergola carport ijongeka intle, kulula ukuyakha, kwaye inyusa ukubukeka kwekhaya lakho. I-Pergolas sisakhiwo esinezithuba ezixhasayo ngaphandle kunye nemiqadi ethe tyaba eluphahleni.
Ungayishiya ivulekile okanye ubeke isinyithi okanye amaplanga ngaphezulu kwayo.
Kumakhaya emveli amaninzi, unokwenza imiqadi enqamlezileyo kunye nophahla oluqinileyo olunamacala. Le yindlela enobuchule ukuba ucwangcisa ukuba i-carport yakho iqhotyoshelwe endlwini yakho.
Izikhululo zeenkuni zikulungele ukuvala inye, zimbini, zintathu, okanye kuwo omane amacala. Oku kukunika inkululeko kwindlela oyila ngayo i-carport yakho. Unokuqhoboshela i-carport yakho eshedini yokugcina eyongezelelweyo.
4. Izimvo ezincinci zeCarport
Ukuba unesithuthi esincinci, inye kuphela imoto, okanye indawo encinci yearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba, emva koko icarport encinci yiindlela efanelekileyo yokuhamba. Ezi ndawo zemoto zinokuba zizigqumathelo ezizimeleyo, kodwa uninzi luqhotyoshelwe eludongeni lwesakhiwo esele sikhona okanye indlu. Uya kuzifumana zenziwe ngezinto ezahlukeneyo, kubandakanya ukhuni, isinyithi, ikhonkrithi kunye nelitye.
Umthombo: @bakkertotaalbouw nge-Instagram
Umthombo: @ bond7922 nge-Instagram
Ukuba sele unayo ikhonkrithi yokuhamba okanye iphedi apho upaka khona imoto yakho, emva koko unokwakha ngokulula isiciko esincinci esolula indawo leyo. Unokwakha isiciko esolulela ecaleni kwendlu yakho.
Unokujonga kwakhona ukwakha igaraji yecarport. Ezi zizakhiwo ezincinci zegaraji ezinophahla olusicaba olwandisiweyo ukwenza indawo yokupaka egutyungelweyo. Oku kukunika isibonelelo esiphindwe kabini sokuba negaraji evaliweyo yokugcina eyongezelelweyo kunye nendawo ekhuselekileyo yokupaka imoto yakho.
Gcina isitayile kunye noyilo lwekhaya lakho xa usenza isicwangciso sakho segaraji. Uya kufuna ukuba olu lwakhiwo lube nengqondo ngokubonakalayo ecaleni koyilo lwakho lwendlu. Oku kuyakuqinisekisa ukubuya okuqinisekileyo kwixabiso lepropathi yakho.
5. Iingcamango ezimbini zeCarport
Ukuba i-carport enye ayinkulu ngokwaneleyo, emva koko unokufuna ikhaphethi enkulu ephindwe kabini okanye kathathu. Olu lwakhiwo lukhulu lukuvumela ukuba ulingane ngaphezu kwesithuthi esinye phantsi kwazo. Ngokufana ne-carport enye, unokwakha isiciko sakho kabini ngezixhobo ezahlukeneyo.
Umthombo: @steda_online_de nge-Instagram
Gcina ukhumbula ukuba i-carport yakho kabini iya kufuna ukuphinda kabini indawo kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Olu lwakhiwo lukhulu luya kuba nefuthe elibonakalayo elikhulu kwipropathi yakho. Ngenxa yoku, unokufuna ukuqaphela ukwakha ulwakhiwo olubaluleke ngakumbi.
Ukuba awukwazi ukufikelela kwilitye elipheleleyo okanye ulwakhiwo lwekhonkrithi, emva koko ulwakhiwo lweepali luya kubonelela kwinqanaba elifanayo lokhuseleko ngexabiso elifikelelekayo. Zama ukutshintsha ukujonga kwayo ngokwenza indawo entle okanye igadi eyijikelezileyo. Oku kuyakufihla ukujongeka kwesakhiwo sakho esikhulu sesinyithi.
Ngowona msebenzi uphantsi kolwakhiwo lwakho, nciphisa inani leepali zeziko. Oku kuya kuwunciphisa umngcipheko wokuba ubethe ucango kwaye wenze ukukrwela okanye ukufota. Unokuthathela ingqalelo ukongeza ezinye ukukhanya kwendlela yokuqhuba ukunciphisa umngcipheko ngakumbi.
6. Iingcamango zeSolar Carport
Ukuba ujonge ukuya elangeni, emva koko jonga ukwenza i-carport yakho ngaphandle kweepaneli zelanga. Oku kususa isidingo sokubeka iiphaneli zelanga kuphahla lwendlu yakho. Ukudibanisa iprojekthi yakho yelanga kunye ne-carport yakho yindlela efanelekileyo yokufumana amandla amancinci kwigridi.
Kusenokwenzeka ukuba awudingi nezinto ezahlukileyo zokuphahla phantsi kweepaneli. Endaweni yoko, iiphaneli ezide zinokuphakanyiswa ngokwaneleyo emhlabeni ukuba zisebenze njengophahla.
Uya kudinga ukusebenza nenkampani esekwe nelizinzileyo yelanga ukumisela eyona ilungileyoUyilo lwecarport. Oku kuyakuqinisekisa ukuba iiphaneli zakho zezona zinemveliso kakhulu. Nje ukuba ifakwe, unokuncamathisela inkqubo yakho yelanga kwibhetri yakho yasekhaya okanye kwizibuko lokutshaja imoto.
7. Iingcamango zeCarport Carport
Isinyithi somkhombe sisakhiwo esifikelelekayo nesilula ukuba ungakha ngokukhawuleza kwaye wenze ngokwezifiso iimfuno zakho, uhlahlo-lwabiwo mali, kunye nendawo ekhoyo. Basebenzisa iikhonsepthi zokwakha ezifanayo njengezinto zokwakha zomthi. Kukho izithuba zenkxaso ezenza isakhelo kunye nesigqubuthelo esicaba ukwenza uphahla.
Umthombo: @vero_jvm nge-Instagram
Uninzi lwezithuthi zentsimbi zenziwe ngentsimbi okanye ialuminium ukomelela nokuzinza kwazo. Unokwakha ulwakhiwo olwahluke mpela ekhayeni lakho ngesinye sezixhobo zentsimbi ezikhoyo. Unokwakha kwakhona isakhiwo senkcubeko esiqhotyoshelweyo sentsimbi esivela kwicala lekhaya lakho.
Emva kokuba unesakhelo, khetha izinto zakho zokuphahla. Ingaba yi-acrylic ecacileyo evumela ukukhanya kwelanga kudlule. Oku kunokudala ubushushu obuninzi kwi-carport.
Ukukhetha uphahla olungagqitywanga lwensimbi kuya kuyigcina imoto yakho emthunzini kwaye ipholile. Olu hlobo lophahla likuvumela ukuba uguqule i-carport yakho kolunye usetyenziso ngaphandle nje kokugcina imoto yakho. Ungayisebenzisa njengesigqubuthelo sepatiyo kwindawo enokusebenziseka ngaphandle okanye uyivale kwaye wenze igaraji yesinyithi okanye umqolomba wendoda kuyo.
8. Izimvo zeNdlu yokuThuthwa kweNdlu yokuThutha
Ukuba ikhaya lakho liqhelekile ngokwesiko, emva koko indlu yenqwelomoya ephefumlelweyo lulongezo olufanelekileyo ekhayeni lakho. Ezi ndawo zisebenzisa izixhobo zokwakha ezazisetyenziselwa ukwakha ikhaya lakho. Zibonisa iikholamu ezinkulu ngakumbi kwaye zinophahla olubonisa enye ekhayeni lakho.
Olu lwakhiwo lubonakala luhlala luhleli kwaye lunokuba ne-siding kunye ne-shingles. Banokuba nesithuba esisebenzayo kwi-attic ngaphezulu kwe-carport. Ukugqibezela ukujonga, ungongeza ifestile okanye i-gable kwi-carport ukuze ivakalise isitayile sekhaya lakho.
Unokwenza isitayile senqwelomoya ukuba siqhotyoshelwe ekhayeni lakho, okanye sisakhiwo esizimeleyo. Nokuba yeyiphi na, ezi zikhululo zeenqwelo moya zinokuba zincinci kwaye zigubungele imoto enye okanye enkulu kwaye zigubungele izithuthi ezininzi.
Inqaku eliqhelekileyo kwezi carport kukuba namacala aqinileyo. Oku kudala ubume obukhulu ngakumbi kunye nefuthe lokwakha. Ungayivala ngokulula ngokufaka umnyango wegaraji kwindawo evulekileyo.
Lithini elona xabiso lincinci lendawo endiyifunayo kwindawo yokuhamba ngenqwelo moya?
Ubukhulu obuqhelekileyo bekhaphethi enye zii-12 x 20 iinyawo. I-carport ephindwe kabini ilinganisa i-20 x 20 yeenyawo. Yiya encinci kunale milinganiselo kwaye ayizukuyikhusela ngokwaneleyo imoto yakho okanye ikunike indawo eyaneleyo yokuqhuba.
Ngaba kufuneka ndizikhathaze malunga neemvume?
Ewe kuya kufuneka ujonge iikhowudi zakho zokwakha ukuze ubone ukuba kuyafuneka na ukuba ufumane imvume yesakhiwo sakho esitsha. Kulapha xa kufuneka ujonge naziphi na iikhowudi ezithintela ubungakanani besakhiwo sakho. Ezi mfuno zingatshintsha ukuba ulwakhiwo luyi-carport ezimeleyo okanye i-awning eqhotyoshelweyo.
Ndizikhetha njani izinto zeCarport?
Khetha izinto onokuzifikelela kwaye ziya kuhlala ixesha elide kwimozulu ohlala kuyo. Ukuba uhlala kwindawo enomswakama ophezulu, ikhonkrithi inokuqhekeka. Ilitye lendalo libukeka lihle, kodwa ikwabiza kakhulu. I-Aluminium ayikhaphukhaphu kwaye iyabiza, kodwa ikwangumngcipheko womonakalo kwiindawo ezinomoya omkhulu.
Ngaba kufanelekile ukuba ndikhethe ikhithi okanye ndiyile i-carport yesiko?
Linganisa indawo onayo kunye nobukhulu bendawo ekuthiwa yi-carport oyifunayo ukukhusela isithuthi sakho. Ukuba ezi mfuno zilingana nekhithi ye-carport, ungagcina imali kwizixhobo kunye nofakelo ngemodeli esekwe ngaphambili. Ukuba ufuna ubungakanani obahlukileyo, njenge-RV carport, uya kuba ngcono xa uyila i-carport yesiko elingana nobungakanani bemoto yakho.
Zonke izimvo zepati emnyama yokuphatha amadoda
utshise umlilo emgodini
phantsi kwesikrweqe somgangatho nike
Ndifanele ndicebise umculi wam we tattoo